Gbanwee: Mobile App Marketing Mkpụrụ na Wayo Mgbochi Platform | Martech Zone
Gbanwee: Mobile App Marketing Mkpụrụ na Wayo Mgbochi Platform
Saturday, March 31, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Gbanwee bipụtara ya na nso nso a Ekwentị mkpanaka App Mobile akụkọ, nke nwere nsonaazụ na-atọ ụtọ. Ihe nlere anya dabere na ngwa ngwa 11,000, ngwa ngwa ngwa ngwa nke 10.7, ihe nde ijeri 1.29 metụtara ihe omume mkpọsa. Imaara, dika ima atu, na:
The ihe kpatara ya na ngagharị ngwa mkpanaka gị nwere ike inwe mmetụta dị egwu na njigide ngwa mkpanaka zuru ezu, iguzosi ike n'ihe, na uru ndị ahịa na ndụ? N'ihi onye ọrụ ọchụchọ nzube, Google na - eduga ngwungwu na ngwa mkpanaka ibudata mkpọsa ngwa
App njigide dịgasị budata n'etiti mba na omenala. Dịka ọmụmaatụ, China na-ahụ ọnụego njigide ngwa ngwa kachasị dị ala nke mba ọ bụla, yana naanị 7% nke ndị ọrụ na-anọdụ na ngwa site ụbọchị asaa
App nke nwere mmetụta dị ukwuu na ngwa nrụrụ ekwentị eji arụ ọrụ. Egwuregwu dị 26 nwere ike ịdọrọ nrụnye aghụghọ karịa ngwa azụmahịa
Budata Gbanwee Ekwentị mkpado aka nke Mobile
Gbanwee bụ ngwe igwe eji agagharị agagharị nke na-ejikọ azụmahịa gị niile n’otu ikpo okwu, na-enye gị nghọta ị chọrọ iji bulie ngwa ahịa ngwa mkpanaka gị. Nke a bụ nkọwa:
Gbanwee ihe eji atụ ekwentị na atụmatụ aghụghọ mgbochi Mwepu gụnyere:
Ngwa ekwentị mkpanaaka - soro uzo ahia ahia gi niile ma kpokọta data ntughari gi maka nyocha miri emi, ma site na pịa ma obu echiche. Ghọta arụmọrụ gị na mgbasa ozi gafee ọtụtụ ọwa mgbasa ozi: soro ma kwupụta ndị ọrụ gị na-abata na isi mmalite ha sitere - na ezigbo oge.
Nchịkọta Ngwa In-App - ihe oru ichoro maka nyocha ngwucha. Chọpụta ihe ndị ọrụ gị na-eme na ngwa gị ọ bụghị naanị na ọkwa macro, kama ọ bụ n'ụzọ zuru ezu na microscopic: chọpụta nke ọma, nyocha na itinye data data, site na nbudata nke onye ọrụ na mbido mbụ na karịa.
Onye Na-ege Ntị - regarget, tinye aka, ma chọpụta ndị ọrụ ọhụụ. Ndị Na-ege Ntị na-elekọta akụkụ ndị siri ike nke iweghachite na itinye aka site na ime ka ọ dịrị gị mfe iwu ngalaba ndị na-ege ntị.
Ugbochi Mgbochi Wayo - kpuchido mmefu ego gị ma kwusi wayo mgbasa ozi mkpanaka na ozugbo. Gbanwee na-enye gị data ahịa njirimara dị ọcha maka nyocha zuru oke. See gị iche na-enweghị akwụ ụgwọ maka adịgboroja installs.
Hụ Mgbanwe ngosi
Freshworks: Otutu Ntughari Ntugharị Ntugharị Mmasị na Otu Suite
WordPress Sidebar Wijetị na Shortcode maka Playkpọ Pọdkastị